न रुपचन्द्र विष्ट छन् न कसैलाई ‘थाहा’ नै छ- एमसीसी के चैँ हो त ? (भिडियाे) « News24 : Premium News Channel
न रुपचन्द्र विष्ट छन् न कसैलाई ‘थाहा’ नै छ- एमसीसी के चैँ हो त ? (भिडियाे)
काठमाडौँ । देशमा अहिले भ्रमवाद नै लागू भएको छ । यसो अरे र उसो अरे भन्दै गरेको कुराले सबैलाई अलमलमा पारेको छ । अलमलको केन्द्रमा छ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी । एसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आजदेखि चार दिने नेपाल भ्रमणमा आइपुग्दा बर्षौदेखि पन्पिएको र चर्चामा आएको एमसीसीको चर्चा झनै चुलिएको छ । उनीहरुको आगमनसंग शहरमा सुनसान होइन कोलाहल नै मच्चिन थालेको छ । जताततै विरोध प्रदर्शन र विरोधमा नारावाजी सुनिदा यस्को सकारात्मक पक्षबारेको चर्चा नगन्य छ ।
आदरणीय दर्शकवृन्द । कसैलाई होच्याएको होइन यो तर नेपाली समाजमा चलेको कथा नै हो यो । एक हुल दृष्टिविहीनहरुले हात्ती छामेको चर्चा बारम्बार हुने गर्छ हाम्रो समाजमा । त्यही दृष्टिविहीनहरुले कसैले हात्तीको कान छामेछन त कसैले पुच्छर । त्यस्तै केहीले खुट्टा छामेछन त केहीले सुँड छामेछन् । हात्ती छामेपछि सबैको प्रतिक्रिया आआफ्नै थियो – कसैले नाङ्लो जस्तो लाग्यो भने त कति मान्द्रो जस्तो फराकिलो भएको अनुभव गरे । हो अहिले एमसीसी पनि यस्तै भएको छ । कसैलाई के त कसैलाई के ?
नेपाल सरकारले लेखेर नै सोधिपठायो । एमसीसीले लागू गर्दा बुँदा बुँदामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई त समस्या पार्दैन । उताबाट एमसीसीले पनि लिखित नै जवाफ दियो कुनै पनि बुँदाले नेपाललाई समस्या पर्दैन । जानकारहरु भन्छन् – सरकारले प्रश्न राख्दा सामान्य कुटनीतिक मर्यादा पनि कायम राखेन । २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन सरकारले एमसीसी सम्झौता गरिसकेको हो । अमेरिकाको वाशिंगटनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसके पछि अहिले आएर १० वटा प्रश्नको पेटारो किन अमेरिकालाई । यो नाटक भन्दा शिवाय केही नभएको टिप्पणी जताततै हुन थालेको छ ।
सरकारको यस्तै यस्तै रवैयाले पनि एमसीसीका बारेमा अधिकांश जनता भ्रमबीच बाँच्न विवश छन् । एमसीसी भनेको के हो भन्दा उनीहरुलाई दृष्टिविहीनहरुले हात्ती छामे भन्दा पर केही नभएको झै भएको छ । यही एमसीसीको नाममा धेरैको ग्यास चुल्हो सल्किरहेको छ । कसैले त्यसमा राजनीतिक रोटी पोलिरहेका छन् त कतिले खिचडी पकाइरहेका छन् । चिया गफ यही विषयमा, गुन्द्रुक भात खानेलाई पनि एमसीसीकै पिरलो, लञ्च र डिनर ज्यूनार गर्नेहरुलाई पनि एमसीसीकै चिन्ता । देश जे होस एमसीसी मय भएको छ । जताततै बहस । हुनत बहस हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । भनिन्छ नै ‘ वादे वादे जायते तत्व बोध’ अर्थात बहसले नै मानिसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउछ । तर एमसीसी बहस भएको धेरै बर्ष वितिसक्यो । तर यस्को बारेमा न कुनै निष्कर्ष निस्किएको छ नत बहसले नै टुंगिने लक्षण देखाएको छ ।
एमसीसीको चर्चा र भ्रमसंगसंगै संघीय संसदको अधिवेशन पनि सुरु भएको छ । तर नेपालमा संसद अधिवेशन सुरु हुन्छ अवरुद्ध हुनका लागि । हिजोदेखि सुरु भएको संसद पनि अवरुद्ध भयो । अब अवरुद्ध गर्ने पालो आयो नेकपा एमालेको । आफुहरु सत्तामा हुँदा उनीहरु संसदीय सर्वोच्चताको गफ दिदै अवरोधको विरोध गर्थे तर यसपटक बोली फेरिएको छ । बोली फेरिएसंगसंगै एमालेको एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ । एमसीसीको बारेमा प्रवचन दिदै हिड्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले हतार गर्न हुँदैन भन्न थालिसके । तर एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसंग निजी निवास बालकोटमा भएको सौहाद्र्धपूर्ण भेटपछि एमालेले पहिला सत्तापक्षको धारण आओस भन्ने धारणा नै प्रष्टसंग राखिदिए ।
देशभित्र,दल भित्र र जनता भित्र जताततै एमसीसी हाउँगुजी व्याप्त हुँदा यता केहीलाई भने मन्त्रिपरिषद्को विस्तार कहिले होला भन्ने पिरलोले नै सताएको छ । तर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव कसैलाई पनि थाहा भएन अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने सत्य । केही सांसद दौरा सुरवाल र कति सांसद धोती कुर्ता सजाएर ठीक्क परेका छन् । कतिले साडी नै ठीक पारिसके । तर कहिले यो त भन्ने बारेमा सबैको एउटै जवाफ छ –थाहा छैन । हो अहिले देश यही थाहा छैनमा चलेको छ ।
एमसीसी हो चैँ के भन्दा– थाहा छैन । एमसीसी पारित होला त– थाहा छैन । सरकार कहिले विस्तार हुन्छ– थाहा छैन । गठबन्धन सरकार टिक्ला त भन्दा पनि– थाहा छैन । एक समय भएका सबै कुरा थाहा चाहियो भन्दै हिडेका थिए– थाहाका प्रवर्तक रुपचन्द्र विष्ट । तर अहिले न विष्ट छन् नत धेरै कुरा कसैलाई ‘थाहा’ नै हुन्छ । आखिरी थाहा कस्लाई चैँ हुन्छ त ? यो प्रश्न जवाफ पनि उही आउछ– थाहा छैन ।